Haiti · Global Voices teny Malagasy
Firenena ao Karaiba
Antigoa sy Barboda
Nosy Tiorka & Kaikosy
Nosy Virijiny Britanika
Tantara misongadina mikasika ny Haiti
Mediam-bahoaka31 Aogositra 2021
Latsaka anelanelan'ny fanomezamboninahitra sy hatezerana, miatrika ny fitomboan'ny fakàna an-kery amoizana aina ry zareo Haitiàna
Mediam-bahoaka29 Desambra 2020
Ao Haïti, arangarangan'ireo hetsika tsy tia pelaka ny kabary fankahalàna ny mpanjanaka
Fitantanam-pitondrana15 Oktobra 2020
Tantara mikasika ny Haiti
Voahazona amin'ny resaka fifindra-monina ao Jamaika ilay olona voalohany ahiahiana ho namono ny filoham-pirenena Haisiana
Jamaika 27 Oktobra 2021
Mbola ho fantatra ny antsipirihany, saingy voasambotra tao Jamaika ny ahiahiana, teratany Kolombiana Mario Palacios Palacios ary nogadraina amin'ny fiampangana ara-pifindra-monina.
Fifidianana 24 Jolay 2021
Fanamarihana marikivy avy amin'ny CARICOM no nitsena ny antso iray nataon'ny vondrona iraisampirenena ho an'ilay praiminisitra voatendrin'i Jovenel Moïse mba hananganana “governemantan'ny marimaritra iraisana sy iarahan'ny rehetra ”, saingy tafapetraka ihany moa izy.
Elsa, ny tafiotra goavana voalohany ho an'ny vanimpotoanan'ny taona 2021, mamely an'i Karaiba
Barbady 05 Jolay 2021
Miaraka amin'ny fiakaran'ny rano tampoka, nt hazo tapakan ny faharavan'ny trano sy ireo toeram-ponenana mijoalajoala, tabataba mangeroka no entin'i Elsa manambara ny fahatongavan'ny vanimpotoanan'ny tafiotra amin'ity taona ity
Melohin'ny ao Karaiba ny fanapahankevitr'i Trump hamerina an'i Kioba ho ao anaty lisitry ny mpampihorohoro; Antenainy ny fanafoanana izany miaraka amin'i Biden
Antigoa sy Barboda 13 Febroary 2021
Antenain'ireo manampahaizana sasany hamerina ny fifanarahana arak'asa amin'ilay nosy ny fitantanan'i Biden/Harris; ireo Kiobàna sasany mpaneho hevitra indray toa tsy mahita ny toy izany. Na ahoana na ahoana, tian'ny CARICOM ny hanesorana an'i Kiobà tsy ho anatin'ilay lisitr'i Etazonia misy ny mpampihorohoro.
Ny raharaham-panonerana ao Karaiba: Fizaràna fahatelo
Antigoa sy Barboda 24 Novambra 2020
Afa-manana anjaran toerana goavana kosa ireo tetikasam-panonerana ara-drariny amin'ny fiatrehana ireo fanamby tahaka ireto: aretina mitaiza, fiovaovan'ny toetrandro ary ny COVID-19
Haïti, mitombo ny fiampangàna ny governemantan'i Jovenel Moïse ho mifandray tendro amin'ireo mpanomana heloka bevava
Ady & Fifandirana 27 Aogositra 2020
"[...] andian-tafika mpandeha an-tongotra tsy mivadi-belirano no ijeren'ny governemantan'i Moïse azy ireo, izay mamoritra ny tsy fandriampahalemana, manakenda ireo feo mpanohitra ary manamafy ny fanohanana ara-pôlitika manerana ny renivohitra."
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 29 Febroary 2020
Olona an-tapitrisany maro maneran-tany no nivondrona mba hanohana ireo miaina miaraka amin'ny VIH/SIDA. Tato anaty aterineto, maro ireo nanombatombana ny fivoarana vita sy ny dingana mbola mila hatrehina amin'ny ady amin'ny fanavakavahana sy ny fiparitahan'ny aretina. Inty misy angon-dahatsoratra, sary ary lahatsary avy amin'ireo miteny sy manoratra amin'ny teny Frantsay.
Global Voices quinceañera: Rehefa nanao ny mety i Karaiba
Barbady 03 Janoary 2020
Tamin'ny taona 2019 ny Karaiba nijery ny marika fanabeazam-bahoaka amin'ny lafiny manontolo kokoa, miteny manohitra ny kolikoly ary niaina indray ny fiverenan'ny fanajana ny vahoaka voalohany ao aminy. Fizarana fahadimy amin'ny dimy.
Satria mankalaza ny faha-15 taona ny Global Voices, ireto ny lahatsoratra notsongain'ny ekipa Karaiba
Trinite sy Tobago 22 Desambra 2019
Tsingerintaona faha-15, GV! Nisafidy ny lahatsorany 15 tsara indrindra tamin'ity taona 2019 ity ny ekipa Karaiba, manomboka amin'ny fihetsiketsehana mahery setra an-dalambe, ny krizin'ny mpitsoa-ponenana ary ny tantaran'ny rariny. Fizarana voalohany amin'ny dimy.
Zava-misy mampatahotra sa zava-poronina mahavariana?
Afrika Mainty 25 Avrily 2019
Tonga ny fizarana fahatelo amin'ny andiany "tarazo, matoatoa, devoly sy ny tahotra", ary mijery ivelan'ny sisintanin'i Amerika Latinina isika amin'ity indray mitoraka ity.